Drug Development Process from Concept to Market | Wire News Services
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Inkqubo yoPhuculo lweziyobisi ukusuka kwiNgqiqo ukuya kwiNtengiso
Inkqubo yoPhuculo lweziyobisi ukusuka kwiNgqiqo ukuya kwiNtengiso
Inkqubo yoPhuhliso lweeDrugs ukusuka kwiConcept to Market ”yongezwe kwinkonzo yeComplianceOnline.com.
Ukuthotyelwa kweOnline kusungule ngokusesikweni ubhaliso kwisemina yayo eyiNtetho yeNkqubo yoPhuculo lweziyobisi ukusuka kwiKhonkco ukuya kwiNtengiso. Isemina iya kubanjwa nge-9 kaFebruwari, 2021, phakathi kwe-10: 00 AM ukuya kwi-5: 00 PM EST, kwaye inikezwe nguMark Powell, uMlawuli eMark Powell Scientific Limited.
Uninzi lwabasebenzi abangengabo oososayensi beenkampani ezixuba amayeza ezinje nge-IT, izibonelelo zabasebenzi, ubunjineli, kunye nabasebenzi bolawulo, kunye nabasebenzi bezesayensi abasandula ukuqeshwa bangathanda ukuqonda ukuba zenziwa njani iziyobisi. Le khosi yenzelwe ukulungiselela abo basebenzi. Nawuphi na umqeshwa oxuba amayeza onqwenela ukuphucula ulwazi lwabo lophuhliso lweziyobisi naye uya kuxhamla kule khosi.
Ukuphela kwale khosi, abazimase esi sifundo baya kufunda:
• Ubungakanani bemakethi yezamayeza kunye neendawo eziphambili zonyango eziqwalaselwa ziinkampani ezivelisa izinto ezintsha
• Iindima zeengcali ezahlukeneyo zamayeza
Iindleko eziqhelekileyo kunye namaxesha anxulumene nophuhliso lweziyobisi
• Amayeza amatsha aphuhliswa njani xa kuthelekiswa neethagethi emzimbeni womntu
• Izizathu zokuba kutheni iziyobisi zisilela ngexesha lophuhliso
• Izinto ezichaphazela ukungafumaneki ngomlomo
• Ivavanywa njani iziyobisi ukuba ayinabutyhefu
• Ifuthe elinokubakho le-polymorphism, ifom yetyuwa kunye ne-isomerism ekusebenzeni nakukhuseleko
• Ukuba ukwenziwa kunokuchaphazela njani ukusebenza kweziyobisi
• Uqinisekiswa njani ukhuseleko kunye nokusebenza kweemveliso zamachiza ngexesha lokuvavanywa kokukhutshwa kweQC
• Ulwazi olufunyenwe kwinqanaba ngalinye lophando lwezonyango
• Ubume beziphakamiso zezomthetho
• Ulawulwa njani utshintsho lwasemva kokuvunywa kwiimveliso zamachiza
• Ulawulwa njani ukwenziwa nokusasazwa kweemveliso zamachiza athengiswayo
Imixholo ibandakanya ukuchongwa kweethagethi zamachiza, ukuhlanganiswa kwamachiza amachiza kunye nokuphuhliswa kwe-biologics, i-pharmacokinetics kunye nokuhlolisiswa kwetyhefu, ukukhula kwangaphambili kwonyango, izifundo zeklinikhi, ukuhanjiswa kolawulo, ukulawula utshintsho emva kokuvunywa, ukunyanga kwamayeza kunye nokujonga ngokubanzi imigaqo elawula ukwenziwa kweziyobisi kunye ukuhanjiswa.
Ngolwazi oluthe kratya okanye ukubhalisela le semina, nceda nqakraza apha.
Uqeqesho olululo ngeWebEEx
Umhla: Februwari 9, 2021 (10:00 AM ukuya ku-5: 00 PM EST)
UGqr Mark Powell nguMfo weRoyal Society of Chemistry (RSC) onamava angaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu njengekhemesti yohlalutyo. UMark wayenguMgcinimafa oHloniphekileyo weCandelo le-RSC le-Analytical Division kwaye wayekhokela iqela elisebenzayo ekuqhubekeni nophuhliso lobugcisa kude kube nguJulayi 2016, xa ixesha lakhe le-ofisi liphela. Phakathi kuka-2003 ukuya ku-2013, wayenguMphathi woPhuculo loPhononongo, kunye noMphathi wezeNzululwazi kamva, wombutho wophando wesivumelwano esekwe e-UK owaqala ukusebenza kwinqanaba lophuhliso lweziyobisi ngomlomo. Ngeli xesha, wayenoxanduva lokuqinisekisa indlela, ukungqinisisa kunye nokuhambisa imisebenzi, kunye nesiqinisekiso sezixhobo zaselebhu kunye neenkqubo zekhompyuter zedatha. Kwi-2013, wamisela uMark Powell Scientific Limited, obonelela ngoqeqesho kunye neenkonzo zokucebisa kwiinkampani ezixuba amayeza. UMark ukonwabele ukusebenza neenkampani zabo bonke ubungakanani kwihlabathi liphela kuqeqesho olwahlukeneyo kunye nokunikezelwa kweengcebiso, kwaye usandula ukubhala i-White Paper kwi-Pharmaceutical Data Integrity ye-VWR.
Ukuthotyelwa kweOnline ngumboneleli okhokelayo weenkqubo zokuthotyelwa kwemimiselo yeenkampani kunye neengcali kumashishini alawulwayo. Ukuthotyelwa kweOnline kuqeqeshwe ngempumelelo ngaphezulu kweengcali ezingama-55,000 ezivela kwiinkampani eziyi-15,000 ukuthobela iimfuno zee-arhente zolawulo. UkuthobelaOnline izinze ePalo Alto, California, kwaye kunokufikelelwa kuyo http://www.complianceonline.com. UkuthotyelwaOnline sisango leMetricStream. I-MetricStream (www.metricstream.comYinkokeli yeemarike kuLawulo olubanzi lwamashishini, umngcipheko, ukuthobela (GRC), kunye neziXhobo zoLawulo loMgangatho kwimibutho yehlabathi.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuThobelaOnline okanye ukukhangela kuqeqesho lwethu, nceda ndwendwela iwebhusayithi yethu
imeyile apha apha
NgoFebruwari 02, 2021, 13:02 GMT